Hupenyu hwevana muGerman | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » Germany Portal » Hupenyu hwevana kuGermany
Inyika yeGerman inobatsira sei vana kurarama hupenyu hwakanaka?
Vanenge mamirioni gumi nevana vanogara kuGermany; izvi zvinoenderana ne 13% yehuwandu hwevanhu. Ruzhinji rwevana vanogara mumhuri mune vabereki vakaroora uye vane hama imwechete kana hanzvadzi.
Kutarisirwa Kubva Mudiki
Sezvo vese amai nababa vanowanzo shanda, huwandu hwevana vari munzvimbo dzekurera huri kuwedzera. Kubva 2013, mwana wese ari pamutemo ane kodzero yekukwereta kubva pazera rekutanga. Vanosvika zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe ezana vana vari pasi pemakore matatu vanoenda kunochengetwa masikati panguva yemasikati; izvi zvakajairika kumabvazuva nyika kupfuura kumadokero nyika. Iyo nguva yekurera inotanga kubva pazera ramatatu panguva ichangoburwa, nekuti hukama hwehukama hwehukama hwakakosha mukukura kwemwana.
Kune Chikoro Makumi Mapfumbamwe Chikoro
Kukomba kwehupenyu hwevana muGerman kunotanga pazera remakore matanhatu. Ruzhinji rwevana runotambirwa chikoro pazera rino. Mugore rechikoro ra 2018/19 paive nevana mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe neshanu vachangotanga chikoro. Zuva rekutanga rehupenyu hwechikoro izuva rakakosha kumunhu wese uye rinopembererwa mumhuri. Mwana wega wega anotambira bhegi rechikoro; bhegi iri rine penzura kesi nemapenzura uye cheni yechikoro yakazadzwa nemakenduru uye zvipo zvidiki. MuGerman mune chisungo chekuenda kuchikoro. Mwana wese anofanira kuenda kuchikoro kweanosvika makore mapfumbamwe.
Kusimbisa Kodzero dzeVana
Asi hazvisi zvese nezve chikoro. Saka, hupenyu hwevana hunobuda sei mune izvi? Vana vane kodzero yekurerwa munzvimbo isina mhirizhonga, yave mubumbiro kubvira 2000. Uye zvakare, Germany yakagonesa United Nations Convention pamusoro pekodzero dzeMwana makore makumi matatu apfuura. Nemusangano uyu, nyika inozvipira kuti ive noutano hwakanaka hwevana uye kuchengetedza kodzero dzevana: donzvo nderokuchengeta vana nekuvarera neruremekedzo. Izvi zvinosanganisira kuremekedza pfungwa dzevana uye kuita kuti vatore chikamu muzvisarudzo. Nyaya yekusanganisa kodzero dzevana mubumbiro iri yakanetsekana muGerman. MuMubatanidzwa Musangano, iyo Federal Hurumende yasarudza kuita izvi izvozvi.
KUFUNGA IZVI: Chii chinonzi Chikamu System kuGermany?
Re: Au Pair Germany